♦️ မြို့ထဲမိန်းလမ်းမကြီးတင် အရောင်း ♦️
♦️ မြို့ထဲမိန်းလမ်းမကြီးတင် အရောင်း ♦️ ♦️ S ( 573 ) ♦️ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ♦️ ( ၈၀ x ၈၄ ) လမ်းအတွင်း ♦️ ပေ ( ၄၀ x ၈၅ ) , မြောက်လှည့် ♦️ RC ( ၃ ) ထပ်ခွဲ , ဘိုးဘွားပိုင်မြေ ♦️ Master Room - ( ၅ ) ခန်း ♦️ သိန်း ( ၁၇၀၀၀ ) ( ညှိနှိုင်း ) 💯 ...
Marketed by Mandalay Real Estate
♦️ ( ၅၄ ) လမ်းမကြီးအနီး အရောင်း ♦️
♦️ ( ၅၄ ) လမ်းမကြီးအနီး အရောင်း ♦️ ♦️ S ( 931 ) ♦️ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ♦️ ( အောင်ဇေယျ x ကျန်စစ်သား ) ကြား ♦️ ပေ ( ၃၅ x ၄၀ ) , အရှေ့လှည့် ♦️ RC ( ၂ ) ထပ် , မူရင်းစလစ် ♦️ Master Room - ( ၂ ) ခန်း , Single Room - ( ၂ ) ခန်း ♦️ သိန်း ( ၁၁၀၀ ...
~ Downtown Area ~
~ Downtown Area ~ 【Followed by English message】 ⏩ အိမ်ခြံမြေစာရင်းအမှတ် > ( RN - 12353 ) 🏩🏩 Downtown မီနီကွန်ဒို အရောင်း 🏩🏩 နေရာ - ပန်းဘဲတန်း မြို့နယ် အဆောက်အဦးအမျိုးအစား - မီနီ ကွန်ဒို အလွှာ - ၇ လွှာ အခန်းအမျိုးအစား - Living Room ၁ ခန်း၊ ...
Marketed by MOOM Real Estate - Yangon Myanmar
7 Mile Condominium Units For Sale
7 Mile Condominium Units For Sale Condo အခန်းများ ရောင်းမည် ☎️ 09765311455, 09254024952 ------------------------------------------ Sales Units: 1- Size - 1035 Sqft2Bedrooms,2Bathrooms, 1 Living Room & 1 Dinning Room 2- Size - 1115 Sqft3...
Marketed by Luxury Estate Myanmar
Rent For Apartment Sanchaung Township
Rent For Apartment Sanchaung Township Location: Moe Ma Kha Street , Sanchaung Township,near Baho Road Floor: 6th,Floor Room: Hall...2,Aircons and Half the Furniture Size: 625, Sqft Price: MMK 4.5Lakhs/Month Hot line... ...
👍ပုဇွန်ထောင်ထဲပဲ ဝယ်ချင်သူများအတွက်👍 🏡🏡Sqft(1050) ကျယ်ဝန်းပြီး အိပ်ခန်း 1ခန်းပါ ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုလေး ရောင်းပေးပါ့မယ်။ 🏡🏡 👍နေရာကောင်း လူစည်တဲ့ နေရာလေးပါနော် 👍 👍လမ်းလည်ကျယ်တယ်နော်👍 👏#ဖွဲစည်းပုံများ# 👉 1Master bedroom 👉 2Air-con 👉 ...
Marketed by ပည်ကြီးတံခွန် အိမ်၊ခြံ၊မြေ ကုမ္ပဏီလီမီတက်
♦️ ( ၇၁ ) လမ်းမတင် အရောင်း ♦️
♦️ ( ၇၁ ) လမ်းမတင် အရောင်း ♦️ ♦️ S ( 1009 ) ♦️ ချမ်းအေးသာဇံ မြို့နယ် ♦️ ( ၃၅ ) လမ်းမကြီး အနီး ♦️ ပေ ( ၃၃ x ၈၅ ) , အနောက်လှည့် ♦️ RC - ( ၃ ) ထပ်ခွဲ , ဘိုးဘွားပိုင်မြေ ♦️ Master Room - ( ၆ ) ခန်း ♦️ သိန်း ( ၁၆၀၀၀ ) ( ညှိုနှိုင်း ) မှတ်ချက် ။ ...
မင်္ဂလာပါ ရွိုင်ရယ်ထွန်းသစ္စာ အိမ်ခြံမြေရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများ .....အားလုံးအဆင်ပြေသွားအောင် 🔹 အိမ်၊ ခြံ၊ မြေများကို ရောင်း/ဝယ်/ငှား ပေးခြင်း 🔹 ပိုင်ဆိုင်မှု မှန်ကန်မှု ရှိ မရှိ အတည်ပြု စစ်ဆေးပေးခြင်း 🔹 အမည်ပြောင်း အမည်ပေါက် ကိစ္စရပ်များ ...
👍ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ထဲ အခန်း ရှာနေလား။👍
👍ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ထဲ အခန်း ရှာနေလား။👍 🏡🏡Sqft(1375) ကျယ်ဝန်းပြီး အိပ်ခန်း 2ခန်းပါ ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုလေး ရောင်းပေးပါ့မယ်။ 🏡🏡 👍နေရာကောင်း လူစည်တဲ့ နေရာလေးပါနော် 👍 👏#ဖွဲစည်းပုံများ# 👉 1Master bedroom 👉 1Single bedroom 👉 ပြင်ဆင်ပီး ...
👍စမ်းချောင်းမြို့နယ်ထဲ အခန်း ရှာနေလား။👍
👍စမ်းချောင်းမြို့နယ်ထဲ အခန်း ရှာနေလား။👍 🏡🏡Sqft(1250) ကျယ်ဝန်းပြီး အိပ်ခန်း 2ခန်းပါ ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုလေး ရောင်းပေးပါ့မယ်။ 🏡🏡 👍နေရာကောင်း လူစည်တဲ့ နေရာလေးပါနော် 👍 👏#ဖွဲစည်းပုံများ# 👉 1Master bedroom 👉1Single bedroom 👉3 ...
Check this url: https://www.lotayaproperty.com/property-for-sale?keyword=%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%B6%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B8,%20%E1%80%9B%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%20(Kyauktada,%20Yangon)&page=9